ISALATHISO SEZIQULATHO -Geofumadas
Eli phepha liphantsi kokwakhiwa, ekukhangekeni ukulungiswa kwezihloko ezisetyenziswa kakhulu kwiBlogu; nangona kule post ungabona dwelisa zonke iiprogram eziye zathethwa nguGeofumadas.
Uqeqesho kunye neencwadi
Ezinye iimveliso ze-AutoDesk
Indlela yokwenza ngayo ngeArgGIS
The lekisa nabanye
Ukuchaneka kweGoogle Earth
Tricks nge Microstation
Ezinye iimveliso zeBentley
Iintetho kunye neemeko
Indlela yokwenza ngayo
Malunga ne-GIS eneenkcukacha
Amanqaku apho kukhankanywe khona
Indlela yokwenza ngayo nge gvSIG
Uqeqesho kunye neenkomfa
Uphando kunye nezixhobo
Uphando usebenzisa i-AutoCAD
Uphando usebenzisa i-Microstation
Topography kunye ne-GIS
Iincwadi zezifundo kunye nezifundo
Ukusetyenziswa kweGPS kwiselula
Iincwadi kunye nezifundo
Amaxwebhu apho kuthethwa khona iGPS
Ulungele ukuhlwa, undixelele apho ndifumana khona imilambo neendlela zeHonduras. Okanye zivela kumaphepha okugqibela kunye nakwi-geoportal ye-ICF.
kunzima. Baya kuba naphi na kwilizwe.
BUZA, Mina ngenza zabafundi IZENZO GEOMATICA, ME babonelele Iifoto zasemoyeni athathwe GOOGLE UMHLABA, KODWA KNOW INDAWO yenu, ezongezayo eMexico, njengokuba kukho LOCATION wenu?
Héctor Donato Montañez uthi:
Ndifuna ukukwazisa ukuba uthathe ngempazamo kwindawo kawonkewonke eseCalle Pedro Echagüe Oeste N ° 149 kwaye unxibelelana noCalle Sarmiento Norte apho kukho isango labucala, le ndawo ikwisixeko saseSan Juan - kwikomkhulu wePhondo leSan Juan, kwiRiphabhlikhi yaseArgentina. Into yokuba ayinasango kwisitalato i-Pedro Echagüe ayibonisi ukuba yeyasesidlangalaleni. Ke ngoko, ndicela ukuba kuthathwe amanyathelo okhuseleko kuqala ukufumanisa ukuba ingaba le nto ndiyithethayo iyinyani na kwaye iyinyani, ndicela ukuba imifanekiso yokusasazwa kwayo isuswe.
Nge template ye-Exel. Kwinqanaba eliphezulu likhonkco.
indlela yokuguqula uluhlu lwama-decimal algraphics to u
Kufuneka ube ngakumbi.
Ngokubanzi, uza kufuneka ubeke inkqubo yoqhagamshelwano,
ngoko uya kufuneka uyishukumisele kwindawo yereferensi eyaziwayo, kwaye uyijikeleze xa kuyimfuneko.
Sibhale kumhleli (kwi) geofumadas. com kwaye siza kuchaza ngakumbi iinkcukacha.
Ndingayithumela njani ifayile ye-dxf engekho kwizilungiso kwisakhelo esifanelekileyo soqhagamshelwano? Ndicinga ukuba i-microstation kulula ... kodwa andazi ukuba njani ..
I ukubuzisa ngento, mna ukubona ledayimenshini engalunganga njani uyayixabisa kuthelekiswa nexabiso contour.
Disemba, 2014 kwi
Ukuba uthetha ngomthetho weHonduran:
- Mhlawumbi uqala uphando lwe-cadastral kwiminyaka emibili: Ziziphi izithethe eziya kusebenza? Ukuba zixabisa kwaye azivumelani, ziya kufuneka zisebenzise i-100%.
Yintoni kufuneka uthathe unonophelo lo ukuphikisa Superior Court of Auditors kunokwenzeka, ukuba anithanga ukubonisa ubungqina kumaxabiso yaphethwa, kuya kufuna ukuba baqokelele amaxabiso ngenxa 100%.
Isivumelwano sidlala indima, ukwenzela ukuba impembelelo ayikho phezulu, xa i-cadastre ichongiwe.
Enye inkalo, yintoni uhlobo lwekhathalogu yexabiso eliyimfuneko yabo? Ingaba izakhiwo, ngexabiso langoku? Ingaba iquka ixabiso lomhlaba wasezidolophini? Ingaba zibandakanya ixabiso lomhlaba wasemaphandleni kunye nezityalo ezisisigxina
Ukuba ngaba iikhathalogu ezisandul 'ukutsha, kunye nexabiso elitsha. Ukubafaka isicelo kwi-100% bekuya kuba nefuthe elibi, kuba abantu, ukuba basebenzise ukuhlawula ngefidavithi, okanye bangakhange bahlawulwe, baya kuziva bexinekile. Oku kunokuba kuxhamle, kuya kukwandisa ukungagqibekanga, kuba abantu baya kuphela ukuya kumasipala ukuba babone xa kufuneka bahlawule, kwaye xa beyazi ukuba ixabiso liya kujika.
Ngoko ke, ukuba amalungiselelo ayimfuneko. Zombini ngenkxaso TSC Act yokuhlangana dolophu, ukuba akufake ifuthe langoku.
Yaredi Harobi Mejia Paredes uthi:
Abanye oomasipala Iikhathalogu lwamaxabiso iminyaka emihlanu 2015-2019, kodwa akukho cadastral uphando tech Urban, echanekileyo iya kuba ukuba of Cadastral yeSebe ukuqala thethwano kwiinkqubo ezi amaxabiso okanye yintoni na inyathelo kungcono ukuthatha kwi-Rural khona nje 30% technified mvukelo, ukuba benze kwimeko enjalo.
LUIS ARMANDO ROJAS uthi:
Molo, inkampani apho ndisebenza, unomdla ekufumaneni irobhothi, kunye iikhamera multispectral kunye photogrammetric, kubandakanywa isoftware yocwangciso moya kunye nocazululo umfanekiso, ukuvumela uhlolo kwezityalo nemfuyo ngokusebenzisa UAVs s ukwazi ngexesha lenene ubume yonaniso ezahlukeneyo ukuphucula ukusebenza kwabo, ukuphonononga ulawulo lwezinambuzane kunye neentlobo kunye nomgangatho yokunkcenkceshela.
Ndingathanda ukuba nesiphakamiso sakho
JOSE LUIS uthi:
banomsebenzi othile ochaza umzobo we-cad cad intersection of lines okanye i-polilineas okanye i-Autocad okanye i-MicroStation.
unokuvelisa Iziko KML ifayile google kunye uqondisa UTM (amanqaku 20) kwaye i id ukulungelelanisa nganye, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (ID, ekwizibanzi, nobude), i-KML ifayile uhlobo kwindawo UTM 8L980G 14 462223.62 m Q m N E 2256691.52 . kodwa ukuguqukela AutoCAD dwg ndidlise ezimbini isazisi data ezahlukeneyo kwelinye icala ize kwelinye icala unika kum amanqaku, apho kuqhubeka ??????
Intshayelelo kwiNkqubo yokuDlala kude
Fumanisa amandla okubona kude. Zama, uzive, uhlalutye kwaye ubone ukuba ungenza ntoni ngaphandle kokubakho. I ...